ऐश्वर्या रायको फिटनेश रहने रहस्य के छ ?
निशान न्युज फाल्गुन २३, 2075
ऐश्वर्या राय बच्चन ब्युटी एण्ड ब्रेनको पर्फेक्ट कम्बिनेशन मानिन्छिन् । मिस वल्र्डको ताज जितेपछि बलिउडमा प्रवेश गरेकी ऐश्वर्या विश्वमै सुन्दरताको प्रतिक मानिन्छिन् । फिल्मका साथै उनी विभिन्न ब्राण्डकी एम्बेसडर छिन् । उनको पर्फेक्ट स्कीन टोन, निला आँखा सबैलाई लोभ्याउने चिज बनेका छन् । एक बच्चाको आमा बनिसकेपछि पनि उनको सुन्दरता कायमै छ।
के खान्छिन् ?
उनलाई आकर्षक कपाल र छाला वंशाणुगत रुपमै प्राप्त भएको हो । यसका साथसाथै उनले आफ्नो सौन्दर्यलाई बिग्रन नदिन स्वस्थ जीवनशैली अपनाउने गर्छिन् । उनी फ्राई, जंक तथा प्याकेज गरिएका खानाबाट टाढै रहन्छिन् भने रक्सी तथा धूमपानसमेत गर्दिनन् । उनी भिटामिन, एन्टिअक्सिडेन्ट तथा खनिज पदार्थको पूर्तिका लागि फलफूल तथा तरकारी प्रशस्त खान्छिन् । घरमा बनाइएका खानेकुरा खान्छिन् भने छाला सुख्खा हुनबाट बचाउन र ताजा देखिन प्रशस्त पानी पिउने गर्छिन् ।
उनको डाइटमा अधिकांश उमालेका तरकारी हुन्छन् भने खैरो चामलको भातका साथ उच्च फाइबर भएका खाद्यपदार्थ उनका प्राथमिकता हुन् ।
छालाको हेरचाह कसरी गर्छिन् ?
ऐश्वर्या बेसन, दुध र बेसारको मिश्रण प्रयोग गर्छिन् भने मोस्चराइजको रुपमा दही र फेस मास्कका रुपमा काँक्रो प्रयोग गर्छिन् । छालामा कुनै समस्या नआओस् भनेर उपयुक्त मोस्चराइजर प्रयोग गरी उनी नियमित मुख धुने गर्छिन् । अधिकांश रुपमा उनी घरमै बनाइएका फेसप्याकहरु प्रयोग गर्छिन् ।
ऐश्वर्याको मनपर्ने कस्मेटिक ब्राण्ड म्याक, लाक्मे, रेभ्लोन तथा मेबिलाइन हुन् ।
फिटनेश रहस्य : नियमित फिल्म खेलेका ताका भने उनी मर्निङ वाक र हल्का शारीरिक अभ्यास गर्थिन् भने योगा पनि गर्थिन् ।
वीर गोर्खे के गर्दैछन् सिमानामा ?
गजल राष्ट्र सेवक झर्दैछन् सिमानामा वीर गोर्खे के गर्दैछन् सिमानामा ?पश्चिमाहरुको हस्तक्षेपले स...
अग्निप्रसाद लिम्बुको ‘सिटिजन युके’ सार्वजनिक
काठमाडौं । अग्निप्रसाद केदेम लिम्बुको गीति एल्बम ‘सिटिजन युके’ सार्वजनिक भएको छ। शुक्रबार रेडियो ...